Relive Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2020] - Luso Gamer
Relive Apk Download ho an'ny Android [Vaovao 2020]
Febroary 18, 2022 Janoary 11, 2022 by John Smith
Ankehitriny ny olona dia tia mandehandeha ary mizara ny tantarany amin'ny alàlan'ny teknolojia vlog. Raha tianao koa ny mandeha amin'ny toerana samihafa amin'ny bisikileta, bisikileta, mandeha na manara-dia noho ny nitondranay an'ity vaovao fantatra amin'ny anarana hoe Relive Apk ity. Amin'ny alalàn'ny mpandeha no afaka manampy ny tantarany amin'ny endrika samihafa.
Ny tena tanjon'ny fampandrosoana ity fampiharana android ity dia ny fanomezana fotoana iray. Amin'ny alàlan'ireo mpitia mampientam-po ao anatin'izany ny mpitaingina board, ny trackers, ny mpihanika ary ny mpilomano sns.
Na dia mampiasa fitaovana fanovana samihafa aza ny olona amin'ny fizarana ny tantarany amin'ny fomba miavaka. Fa mazàna, ny video ary koa ny fanovana sary, dia mitaky fahaizana matihanina. Mba hanomezana endrika tsy manam-paharoa ireo tantaranao mampiseho ny sarinao amin'ny fomba hafa.
Noho izany ny asa fanovana dia asa sarotra miampy firaketana zavatra toy ny matihanina. Ka raha dinihina ny fahasarotana sy ny asa mafy dia miverina miaraka amin'ity rindranasa vaovao ity izahay. Izay tsy manolotra fotsiny ny hampiseho ny tantaranao amin'ny fomba samihafa. Fa manolotra safidy malalaka kokoa ao anatin'izany ny angon-drakitry ny mpijery.
Aiza ireo karazan'olon-kafa tia mandre sy mijery tantara adventurous samihafa. Fanampin'izany, nanampy ireo mpikirakira ity sarintany satelita ity ao anatin'ny fampiharana. Iza no manara-maso ny làlanao ary ahafahan'ny mpampiasa manampy sary isan-karazany hanao ny dia tsy manam-paharoa.
Ankoatr'ireo safidy rehetra ireo dia afaka manangana tantara sary 3D amin'ny alàlan'ny Apk ny mpampiasa. Na izany aza, ny fampisehoana ireo sary miampy ny zotram-pifandraisana amin'ny zanabolana amin'ny endrika 3D dia hahasarika kokoa ny masony. Ka raha te-hanangana ny tantaranao manokana ianao fa tsy ny App eto.
Inona ny Relive Apk
Araka ny amariparitantsika lalina etsy ambony fa rindranasa finday namboarina manokana ho an'ny fitaovana Android. Izay matetika ampiasaina hanao asa maro ao anatin'izany ny fakana sary, horonan-tsary ary ny zotra fanarahana amin'ny alàlan'ny sari-tany satelita.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka mijery sy mampiseho ny tantarany ao anaty sari-tany satelita. Na izany aza, nanolo-kevitra ny amin'ny torolàlana ho an'ny mpamorona ny mpampiasa finday dia afaka mampiseho ny tantarany manontolo ao anatin'ny sari-tany zanabolana. Mampiasa teknolojia fanarahan-tsaina toa ny GPS.
anarana Velombelomy hatrany
Developer Mody BV
Anaran'ny fonosana cc.relive.reliveapp
Arak'izany dia efa tafiditra ao anaty finday ny GPS. Mba hahafahana manara-maso, ny mpampiasa dia tsy maintsy mamela ny Relive Pro Apk hiditra amin'ny GPS ary hanara-maso ny sari-tany satelita. Izay efa tafiditra ao anatin'ny rindranasa finday.
Ankoatr'izay, mba hamaliana azy bebe kokoa dia ampian'ireo mpandrindra ity takelaka sosialy ity ao anatin'ny Apk. Izay manamora kokoa ny fizarana ny tantaranao amin'ny forum samihafa. Ankoatr'ireo endri-javatra rehetra ireo dia ampifandraisin'ny developer amin'ny fampiharana hafa.
Midika izao fa afaka mampifandray sy manafatra ireo tantara taloha na sary nalaina tamin'ny fampiharana hafa ireo mpampiasa. Noho izany ny Relive Mod Apk dia miasa tsara amin'ny fampiharana hafa izay misy Suunto, Endomondo, MapMyWalk, Polar, MapMyRide, MapMyHike, Garmin Connect ary MapMyRun.
Toe-javatra manan-danja amin'ny The App
Maimaimpoana ny fampiharana misintona avy eto miaraka amina tsindry iray.
Manolotra safidy malalaka kokoa izy ao anatin'izany ny sari-tany zanabolana.
Fanampin'izay, nampian'ireo mpandrindra ity rafitra fanaraha-maso sy fanarahan-dia ity ao anatin'ny fampiharana.
Izay hanampy ny GPS hanara-maso sy hitahiry ny tantaram-pitetezanao.
Ilaina ny fisoratana anarana raha te hiditra amin'ireo endri-javatra.
Tsy mahazo manao doka avy amin'ny antoko fahatelo.
Ny mpampiasa interface tsara ny fampiharana dia tena tsotra.
Asehoy ny sary amin'ny endrika 3D.
Asehoy ny zotra amin'ny endrika 3D.
Manafatra tantara taloha kokoa amin'ny alàlan'ny plugin import.
Ahoana no fampidinana ny rindranasa
Araka izany dia efa niresaka izahay fa afaka misintona ny Apk File eto ny mpampiasa finday. Mba hahazoana antoka fa nampiala voly ny mpampiasa amin'ny vokatra mety. Mametraka fampiharana mitovy amin'ny fitaovana samihafa izahay, raha vao azonay antoka fa tsy misy rindrambaiko maloto sy fandidiana ampiasaina.
Avy eo izahay dia manome azy ao anatin'ny fizarana fisintomana. Raha te-hisintona ny kinova farany an'ny Relive Apk azafady tsindrio ny rohy fampidinana azonao ao anatin'ny lahatsoratra. Tsindrio ilay rohy dia hanomboka ho azy ny fisintomanao.
Hayat Eve SÄ ± ÄŸar Apk
Mpitsangatsangana ve ianao ary te-haka sary sy horonan-tsary samihafa? Avy eo izahay dia manoro hevitra anao hametraka ny kinova Apk nohavaozina avy eto. Raha mampiasa raha sendra olana ianao dia azonao atao ny mandatsaka ny fangatahanao ao anatin'ny faritra misy ny hevitra. Hamaly ny fangatahanao izahay raha vantany vao voaray izany.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Velomy Apk, Relive Mod Apk, Relive Pro Apk Post Fikarohana
Bus Simulator Ultimate Apk 2022 Download ho an'ny Android [OBB]
Mini Football Apk 2022 Download ho an'ny Android [Vaovao]